Bonke abesifazana bebudala bebukele ubungakanani babo, ukuvelisa iindlela ezininzi kunye neendlela ezintsha zokuba zihle kakhulu. Akukho mntu ongayiva nantoni na malunga nokutya kunye nesondlo esifanelekileyo, umbuzo wukuthi, zeziphi ukutya kunye noko kuthetha ukuthini isondlo esifanelekileyo. Ngoku onke amaphephandaba namaphephancwadi zizele iintlobo ezahlukeneyo zezidlo ezithembisa ukunciphisa ubunzima ngexesha elifutshane. Abanye abantu bacinga ukuba zonke ukutya ziyingozi, kodwa zihlwaya, okanye ziphilile, kodwa zingenakwenzeka ngokupheleleyo. Nangona iimbono eziqhelekileyo, kubakho nemveliso enokuthi ibanjwe kuzo zombini iindidi. Ezi ziquka i-salmon. Inxalenye ethile yembali
Kuma-Middle Ages, i-salmon yayithandwa kakhulu eYurophu. Kwavunwa ebusika, ngaphambili kwakomiswe ehlobo. Kodwa eRashiya, ngexesha le-perestroika, le ntlanzi yayingenanto enkulu. I-Salmon isabuncwane, kodwa isele ifikeleleke kakhulu. Le ntlobo yeentlanzi itholakala kummandla wePacific ne-North Atlantic Ocean. Intsapho yaseSalmon iquka intlanzi njenge-pink saalm, i-salmon, i-salmon, i-trout, i-keta, njl.
I-Salmon isoloko isetyenziswa kwizidlo ezahlukileyo. Umxholo wekhalori we-salmon ungama-155 kcal kuphela. Ngomxholo ophantsi wekharoriki, le ntlanzi iqukethe iivithamini ezininzi. Ixabiso lempilo yalo mveliso - iiprotheni (20 g), amafutha (8.1 g), i-carbohydrates (0 g). I-Salmon inyama inomthamo omkhulu we-phosphorus, i-potassium, i-chromium kunye ne-selenium, iivithamini zeqela A ne-B. Zonke ezi iivithamini ziyazinceda iinwele, izipiko kunye nesikhumba, kunye nokuphucula umgangatho wesantya somntu womntu, umbono, kunye ne-action vasodilating. Iipropati ezisebenzayo zeentlanzi zijonge iinkqubo zokuxubusha emzimbeni. Ngokusetyenziswa rhoqo kwe-salmon, imemori, ingqwalasela kunye nokulungelelaniswa kokunyakaza kuyaphuculwa.
I-Salmon nayo iqulethe inani elikhulu le-Omega-3 fatty acids, efunekayo ngumntu ukukhusela izifo zesifo senhliziyo kunye nokondla iiseli zobuchopho. Kuqhelekile ukuba umntu omdala asebenzise malunga ne-3 g ngosuku. amafutha acids. Iipropati ezingaqhelekanga ze-Omega-3 fatty acids nazo kwimeko yokuba zichaphazela ukuguga kwe-biological yomzimba. U-Omega-3 ulwandisa ulutsha ngokunciphisa i-cholesterol, ukulawula iishukela zegazi kunye nokucima iindonga zemithambo yegazi kwi-thrombi ephakamileyo.
Ngenxa yoko, i-salmon ayikho kuphela ikhalori ephantsi, kodwa ine-pesenti ephakamileyo yeempawu zonyango ezinegalelo kumntu wonke umzimba.
Ngokuthandayo akuphikisi ...
Ukongezelela, ukuba i-salum iyona nto ibaluleke kakhulu, nayo iyancasa kakhulu. Inyama yale ntlanzi ibomvu. Amagqabi kuwo akhulu ngokwaneleyo ukuba kulungele ukukhetha kwabo kwenyama.
Inyama yentlanzi inomdla oyingqayizivele, ngoko ke i-gourmet eqondayo iya kuyithanda. Kukho izitya ezininzi ezahlukileyo ezivela kule ntlanzi: unokutshaya, umile, uselwandle, kwaye ufake isicelo sokutya kwifom eshushu. I-Salmon inyama inokubiliswa, i-stewed, ibisiwe kwaye ibhaka, ifakwe kwi-salads, kwaye igcinwe kunye nemveliso yekhredithi nayo yenziwe kuyo. I-Salmon caviar nayo yimpumelelo enkulu kwaye ingahlobisa nayiphi na idilidi.
Imida yokusetyenziswa kwe-salmon
Ngelishwa, kukho imida ekusebenziseni le ntlanzi. I-Salmon inyama iquka i-mercury, inobungozi ekuphuhlisweni ngokupheleleyo kwengane yomntwana, ngoko-ke oomama abakhulelweyo nabancengayo kufuneka baxhomeke kwi-salmonids. Kubalulekile ukunciphisa ukusebenzisa le ntlanzi kunye nabantu abaneesifo sesibindi nesisu. I-Salmon, nangona i-caloric content content, isona imveliso enamafutha kakhulu, ngoko kufuneka ilondolozwe ngokucophelela ngabantu abanomzimba obuninzi.
Iimveliso zomeleza i-Vascular
I-Vitamin C: izakhiwo ezixhamlayo
I-pumpkin ne-apple pancake nge-sinamon
Intlungu ehlangeneyo, zokupheka kwabantu
I-biography yomdlali we-actress Natalia Bochkareva
IiSaladi ongazange uzi
Nezhdanchik ... Indlela abadumileyo abasabela ngayo ekunqobeni kukaDonald Trump kwintetho yase-US, umfanekiso
Akunakwenzeka ukuba uguqule uthando ibe sisifo